musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kisimusi paBiltmore House Zvino Vhura
Nhasi uno kucherechedza kuvhurwa kweBiltmore's estate-wide zororo rezororo, Kisimusi kuBiltmore. Tsika iyi yakatanga makore anopfuura 125 apfuura apo George Vanderbilt akapemberera Kisimusi yekutanga nemhuri neshamwari mumusha wake mutsva - Biltmore House. Vaenzi vanokokwa gore rega rega kuti vafarire kurongeka kwezororo pane estate. Wakasarudzika gore rino mukana wekusanganawo naVan Gogh Alive yakaunzwa neGrande Zvakaitika, yekutanga yeatatu akawanda-sensory edhijitari adhijitari kuratidzwa mune yegore-refu akateedzana.
Biltmore House hukuru
Décor muBiltmore House inosanganisira 62 miti yeKisimusi yakashongedzwa nemaoko, inopfuura 14,000 zvishongo, 45,000 mwenje yezororo, 250 makenduru, 1,000 tsoka dzegarland, uye 175 poinsettias. Zvishongedzo zvinoyerwa kusvika pakakwirira kushandura chivakwa seBiltmore kuita chiitiko chikuru chiri gore negore.
Zviitiko zviviri zviripo zvekunakidzwa neBiltmore panguva yezororo - Kisimusi kuBiltmore uye Candlelight Kisimusi Manheru. Nzvimbo yese yakavhurirwa vashanyi sechikamu chekubvumidzwa kune chero chiitiko cheKisimusi.
Kisimusi paBiltmore kupemberera masikati, Mbudzi 5, 2021 - Ndira 9, 2022
Tsika iyi inosanganisira kushanya kwemasikati kweBiltmore House uku nzvimbo yacho yakashongedzwa nekushongedzwa kwezororo iyo inowanda muzviuru.
Manheru eKisimusi, Mbudzi 5, 2021 - Ndira 8, 2022
Biltmore House inopenya nemwenje wekenduru uye nemwenje wemoto panguva ino yehusiku kushanya, ichichinja kushanya kwemasikati uye ruzivo. Vaimbi vakamira mumba mese vanoita zvinofarirwa nemwaka.
"Van Gogh Alive" digital art kuratidzwa
Chikamu chekutanga chegore-refu redhijitari art akatevedzana kuBiltmore, Legends of Art & Innovation, inoenderana nekutanga kwemwaka wezororo nekuvhurwa kweVan Gogh Alive kwakaratidzwa neGrande Zvakaitika. Akagariswa munzvimbo yeBiltmore's chiitiko, Amherst kuDeerpark, uye ichimhanya kusvika Kurume 5, 2022, ichi chiitiko che-multi-sensory kunyudzwa muhupenyu hunoshamisa hwaVincent van Gogh kuburikidza nechiedza, ruvara, ruzha uye hwema.
Mhedzisiro yezororo panzvimbo yeimba: New Kisimusi pop-up shopu, mashoma ekuburitsa waini, kupenya kukuru uye nezvimwe.
Mabasa ezororo anowanikwa munzvimbo yese. Mukati meConservatory mune poinsettias, amaryllis, Christmas cactus, bromeliads, orchids, rugare maruva, nezvimwewo. Iyo estate yechando magadheni uye mamaira erunyararo nzira dziripowo pakuongorora.
Antler Hill Village inopa kuonekwa kubva kuSanta yemifananidzo uye kunzwa zvishuwo kubva Nov. 6 kusvika Dec. 23. Sezvo manheru anowira pamusoro peAntler Hill Village, boka renyeredzi rezviedza zvezororo rinovhenekera miti, zvivakwa, Winery tunnel uye nzira dzekufamba. Kisimusi pop-up shopu ine zvese zvinodiwa kupemberera mwaka.